Warshad Ag-kiimiko | Shiinaha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Tayada sare ee agrochemical Imazapyr acid 97% TC cas 81334-34-1
Magaca Kiimikada: Imazapyr acid 97% TC
CAS Lambar: 81334-34-1
Qiimo wanaagsan Kasugamycin 70%, 80%, 90% WP CAS 6980-18-3
Kasugamycin waa antibiyootiko aminoglycoside ah oo asal ahaan laga soocay 1965, Streptomyces kasugaensis, Streptomyces oo laga helay agagaarka masaajidka Kasuga ee Nara, Japan. Kasugamycin waxaa helay Hamao Umezawa, oo isna helay kanamycin iyo bleomycin, daawo ahaan kahortaga koritaanka fangaska sababa cudurka qarxinta bariiska. Mar dambe ayaa la ogaaday in la joojiyo koritaanka bakteeriyada sidoo kale. Waxay u jirtaa sida cad, walax dhagax leh oo leh kiimikada qaaciddada C₁₄H₂₈ClN₃O₁₀. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'kasumin'.
Tayada sare ee Propargite agrochemical 90% TC, 57% EC, 73% EC CAS 2312-35-8
Shayga saafiga ahi waa dareere viscous amber mugdi ah, oo ku daatay 160C, oo leh cufnaan qaraabo ah 1.14 iyo tixraac soo noqnoqod leh oo ah 1.5223. Ma aha mid lagu milmi karo biyaha kuna milmi kara inta badan dareeraha dabiiciga. 40% isku-uruurinta emulsifiable ee propargite waa dheecaan madow bunni ah oo waxyar dareema Daawada ceyriin ee warshadu waa dheecaan si qumman u iftiimaya oo leh cufnaanta qaraabada (D20) ee 1.085-1.115 iyo barta tooska ah ee 28.25 ℃. Kala-miirnaantiisa biyaha waa 632mg / l, waana mid si fudud ugu milmi kara dareerayaasha kala duwan ee organic sida acetone, ethanol iyo benzene.
Tayo sare Trifloxysulfuron 75% WDG CAS 145099-21-4
Albamka Chenopodium, Amaranthus retroflexus, Xanthium strumarium, Nightshade, Abutilon theophrasti, Portulaca oleracea, Acalypha australis, Convolvulus arvensis, Commeline communis, Field Sowthistle Herb, Cirsium setosum, Equisetum arvense; Rotala indica, Sagittaria pygmaea, Alismataceae, Potamogeton distinctus, Pontederiaceae, Monochoria siilka
Qiimaha wanaagsan 98% Pyrazosulfuron ethyl budada cas 93697-74-6